जनतालाई उ’ल्लु बनाउने विजय शाहीलाई पक्राउ ? – Kavrepati
Home / समाचार / जनतालाई उ’ल्लु बनाउने विजय शाहीलाई पक्राउ ?
जनतालाई उ’ल्लु बनाउने विजय शाहीलाई पक्राउ ?
admin July 28, 2021	समाचार Leaveacomment 80 Views
मृ’त्यूको हल्ला झू’टो रहेछ,’ डिएसपी शाहले भने ।विजय शाहीका शिक्षक दिपकबहादुर शाहीले सुरुमा फोटो सहितको खबर फेसबुकमा हालेका थिए । अस्पताल लैजाँदा लै’जाँदै विजयको नि’धन भएको उनले उल्लेख गरेका थिए । त्यही पोष्टका आधारमा धेरैले विजय शाहीलाई श्र’द्धा’न्ज’ली दिन भ्याए । तर शाहीले आफ्नो पोष्ट फेसबुकबाट ह’टाइसकेका छन् ।
Previous माधव नेपालले अन्तिममा दिए धोका! बैठकमा यस्तो सुनेर देउवा परे छक्क
Next पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन, श्रावण १४ गते बिहिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल